Thola imiphumela emihle kusuka ekuthandeni ku-Intanethi!
Ukuthandana kwi-Inthanethi akuyona indlela elula yokuthola umlingani ofanele nobungane, uthando noma umndeni. Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi akuwona wonke umuntu onenhlanhla ngalokhu. Kungani? Mhlawumbe, kungenxa yokuthi awuboni umuntu obizwa ngokuthi "bukhoma", ngakho-ke awukwazi ukwakha umbono ophelele nolungile. Abantu ekuxhumaneni nomphakathi - izigidi. Ukuze uthole umlingani omuhle noma umlingani, sebenzisa amathiphu alandelayo.
Beka ekhasini lakho isithombe esiphumelele kunazo zonke, futhi sihlanzekile ngempela. Akunconywa ukuthumela isithombe esingenangqondo ngezingubo zokugqoka: ukugijima kulabo abadinga ubulili kuphela. Uma unesisindo esingeziwe, kungaba ukuhlakanipha ukuthathwa isithombe nge-akhawunti engekho ukuphakama okugcwele, kodwa emahlombe. Uma ukuxhumana nomuntu othakazelisayo kuqala, lapho ubuhlobo bubonakala buthembisayo kuwe, kumtshele (noma yena) ukuthi awunesihlahla esincane. Uma umuntu esevele ewazisa izimfanelo zakho zangaphakathi, uzwela ngezinto ozilibazisa kanye nezimiso zokuphila, uzophatha ulwazi ngesisindo ngokuthembeka.
Gcwalisa ifomu ku-akhawunti yakho ngemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka. Lokhu kuzokulondoloza ekuxhumaneni okungadingekile, okungavumelekile: labo abangathandi iphrofayela yakho ngeke baqale ukuxhumana. Kodwa uma othile ethanda ulwazi futhi (yena) eqala ukukubhalela, singaphetha ngokuthi izikhathi zokuzivumelanisa nomuntu ncamashi. Futhi ukwenza izinyathelo ezilandelayo ngokuqondene nobungane noma uthando kunengqondo.
Noma kunjalo, kunabantu abasendaweni yokuphola abajabule ukukucasula, ukuhlekwa usulu noma i-nahamit. Ungazami ukuziphendula! Yeka imiyalezo enjalo futhi ufake lezi zinambuzane kuhlu olumnyama. Kungani kuphazamisa isimo sakho sokuzizwa, ukuthola ubuhlobo noma ukuzama "ukubeka" aboni?
Buza imibuzo eminingi kulabo abathanda wena ngempela. Uhlobo luni lomsebenzi? Iyini isimo sengqondo enkolweni? Ukwakha umndeni? Ayini amaphupho akho? Yiziphi amakilasi ngempelasonto? Futhi izinto nezinto. Nakuba ezinye zezimfihlo zakho zingasheshi ukuvula (isibonelo, izinga lemali engenayo noma, ake sithi, isizathu sangempela sohlukaniso). Ungafundi nje kuphela izinzuzo kodwa futhi nomuzi womuntu omaziyo omusha (umngane). Mhlawumbe umuntu uvame ukuphuza. Kungakhathaliseki ukuthi uyabhema. Noma ngokumangalisayo libhekisela esontweni lapho uke uhamba khona isikhathi eside. Awuthandi? Khona-ke ungachithi isikhathi ekukhulumisaneni, bheka abantu abafanelekile kakhulu kuwe.
Uma ukholelwa ekubhukeni kwezinkanyezi, kufanele uqaphele ukuhambisana kwesibonakaliso sakho sezinkanyezi nezibonakaliso zabafakizicelo. Kunezinhlanganisela eziningi ezivumelanisiwe, zikhona ezimbalwa, futhi kukhona ukuphikisana. Ngakho-ke, izibonakaliso zezici ezifanayo nezihlobene zihlangene ngempumelelo: isibonelo, umlilo ngomlilo nomlilo emoyeni. Kunoma iyiphi incwadi yereferensi yenkanyezi ungathola ulwazi ngalokhu.
Ungakhohlwa ukubuza labo owakuthandayo, umbuzo onjalo: "Futhi ungubani umlingani ofanele wena (umlingani)?". Yenza isiphetho ngokuthi uzoqhubeka yini nokuxhumana. Phela, kuyasiza kakhulu ukuthola ukuthi uhlangabezana nezidingo zomuntu kunokuba uthole iqiniso ekugcineni - nokuqonda ukuthi awukwazi ukuhlangabezana nokuhle. Ngokungazelelwe udinga umlingani (noma umlingani) ukuba afundise izingane, futhi awulungele ukuyeka inkululeko yakho eminyakeni ezayo? Noma, uma ungowesifazane, ngesizathu esithile nje ngeke ukwazi ukubeletha ingane?
Yenza ukuncoma kumngane noma owaziwayo. Kuqotho kuphela. Ukudumisa kuphakamisa imizwelo emihle - futhi izincwadi ziba nokwethembela futhi zithandeka kakhulu.
Ingabe le ndaba isivele ihamba usuku? Kuhle! Kodwa - yibeke kabusha isikhashana. Ngaphambi kokuhlangana, khuluma efonini (izwi nenkulumo okufanele uyenze uma lo muntu efaneleka). Noma-ngisho nakakhulu - ngekhamera yewebhu. Uma uzikhethela ukuthi ufuna ngempela ukuya ngosuku futhi wazi umuntu kahle, kufanelekile ukuxoxisana nomhlangano. Lokhu kuzokusindisa ekudumeni. Amantombazane kufanele akhumbule ukuthi ukuvikeleka akulimazi: vumela umhlangano uqhubekele endaweni egcwele indawo (endaweni yokudla, e-restaurant, enkundleni yezemidlalo noma, uthi, embukisweni), hhayi endlini. Tshela umndeni wakho noma intombi lapho uhamba naye nokuthi uyaphi.
Futhi wokugcina. Ungakheli ukukhetha "isilinganiso". Kamuva, uzozisola ngokuphindaphindiwe ukuthi uthintane nomuntu ongafanelanga wena. Hlala uphendukela ekusesheni kwakho ubungane noma uthando, khetha okuhle kakhulu! Bese uthole imiphumela emihle.
Indlela yokwenza umyeni wakho othandekayo abe nosuku lothando
Izindlela Eziphumelelayo Zokunqoba Inhliziyo Yendoda
Ungamangala kanjani othandekayo embhedeni?
I-Horoscope yokukhohlisa ngezibonakaliso ze-zodiac
Injabulo yesifazane ebuhlotsheni bomndeni
Uma indoda nowesifazane bezondana
Izakhiwo eziwusizo zekhofi
Umlingisi womlobokazi: makeup lomshado for amehlo ensundu
Imithetho eyisisekelo yomshado esontweni
I-Kalanchoe plant: izakhi zokwelapha
I-compote yamajikijolo amaqhwa: iresiphi yokupheka
Yini okufanele siyenze uma sisemsebenzini?
I-almond pie nama-apricot
Zokupheka okumnandi zokudla okunempilo
Indandatho ye-Brewed ne-pink curd cream